Izindaba - Ungalifaka Kanjani Ishidi Lesibuko Se-Acrylic
Ishidi lesibuko le-Acrylic lenzela ukwengeza okusebenzayo nokuhle ezindongeni, eminyango, ekungeneni nokuningi, engeza ukuthinta kwanamuhla kunoma isiphi isikhala osifaka kuyo. I-Acrylic mirror sheet ithandwa kakhulu njengoba ihlinzeka ngokubukeka kwengilazi ngenkathi inamandla nengxenye isisindo. Ingasikwa kalula futhi ifane ukuze ilingane ukwakheka okuthile, okusho ukuthi ungafaka amashidi amakhulu wesitatimende sesibuko sesitatimende noma vele ufake izingcezu ezincane zokwenza okokuhlobisa kwe-kaleidoscopic. Ishidi lesibuko le-Acrylic nalo ligobeka kalula kunengilazi, okusho ukuthi lingavumelana nanoma yikuphi ukungahleleki okukhona ebusweni obunamathisela kukho. Uma ufuna ukuqeda noma yiliphi ithuba lokuhlanekezelwa, iya ku-acrylic ejiyile, ngoba ayiguquki kakhulu futhi inobuqotho obuphakeme obuphezulu.
Uma ufuna ukufaka ishidi lesibuko le-acrylic ekhaya lakho noma ebhizinisini, landela izeluleko ezingezansi ukuze uqiniseke ukuthi ukufakwa kwakho kuhamba kahle.
Ngaphambi kokufaka ishidi lakho lesibuko le-acrylic, udinga ukulungisa indawo osebenzela kuyo:
• Linganisa isikhala onamathisela i-acrylic ngokunembile - ngenkathi lokhu kuyiphuzu elisobala, kubalulekile ukwenza lokhu kahle ukuze konke ukufakwa kwakho kuhambe kahle.
• Khipha u-3mm kuyo yonke imitha kusuka kosayizi - ngokwesibonelo, uma ingaphezulu lalingu-2m x 8m, wawuzokhipha u-6mm ohlangothini lwamamitha amathathu no-24mm ohlangothini lwemitha eli-8. Inombolo evelayo usayizi odinga ukuba yishidi lakho le-acrylic.
• Gcina ungqimba lwe-polyethylene okuza ngalo ishidi le-acrylic ukuze kuqinisekiswe ukuthi alilimazi noma alinamabala ngesikhathi senqubo yokufaka.
• Maka lapho udinga khona ukubhola, ukusika noma ukubona ishidi lakho ukuze ulibe usayizi ofanele. Yenza lokhu kwifilimu yokuvikela, hhayi ishidi le-acrylic.
• Uma usika ishidi lakho le-acrylic ngosayizi, qiniseka ukuthi uhlangothi olubukwayo nefilimu evikelayo lubheke kuwe, ukuze ubone ukuthi kuhamba kanjani ngesikhathi senqubo yokufaka.
Okulandelayo, udinga ukulungisa indawo okuzofakwa kuyo ishidi le-acrylic. Ezinye izinto ezifanele ukufaka ishidi lakho lesibuko le-acrylic ukufaka i-gypsum engenamanzi, amathayili wesibuko angahleliwe, ukhonkolo, udonga lwamatshe noma ukhonkolo, amapaneli e-chipboard namaphaneli e-MDF. Ukuqinisekisa ukuthi ingaphezulu lakho selikulungele ukufakwa, hlola ukuze ubone ukuthi licwecwe ngokuphelele, libushelelezi futhi alinamswakama, igrisi, uthuli noma amakhemikhali. Ukuze uqiniseke ukuthi indawo oyikhethile ingalisekela ishidi le-acrylic, zama ukulifaka ku-substrate yakho ukuze ubone ukuthi lingakwazi yini ukusekela isisindo. Ngemuva kokuthi uqinisekise ukuthi indawo yakho inamandla okuthwala umthwalo odingekayo, ungaqala ngokuzethemba ukufakwa kwakho. Landela lezi zinyathelo ezilandelayo ukuqedela ukufakwa okubushelelezi:
• Susa ifilimu evikelayo ohlangothini lweshidi elizobe libheke phezulu bese ulihlanza nge-petroleum ether noma i-isopropyl alcohol.
• Khetha i-ejenti ebophelelayo, okungaba yiteyiphu emaceleni amabili, okunamathiselwe kwe-acrylic noma abicah. Uma usebenzisa itheyipu, beka imichilo evundlile ngokulinganayo ngaphesheya kobubanzi beshidi lesibuko le-acrylic.
• Bamba ishidi nge-engela engu-45 ° lapho uhlose ukulibeka khona. Bheka ukuze ubone ukuthi ujabule ngokuphelele ngokuqondanisa, ngoba leli yithuba lokugcina okufanele ulungise noma yiziphi izingqinamba ngaphambi kokufaka ishidi ku-substrate.
• Susa iphepha kutheyiphu yakho emaceleni omabili bese ubamba onqenqemeni lweshidi elibheke ebusweni bakho nge-engela elifanayo le-45 °. Sebenzisa ileveli yomoya ukuze uhlole ukuthi iqonde ngqo yini odongeni, bese unciphisa kancane i-engeli leshidi ngakho-ke ilula kahle ngokumelene ne-substrate.
• Cindezela ishidi ngokuqinile ukuqinisekisa ukuthi ithephu linamathela ngokuphelele - qhubeka ucindezele isikhathi eside lapho udinga ukuqinisekisa ukuthi i-adhesive ithinte ngokuphelele.
• Uma ishidi selivikelekile, susa ifilimu evikelayo ohlangothini olubukwayo manje olubheke kuwe.
Ngobunye ubuchule besandla somuntu osebenza ngezandla, noma ngubani angafaka isibuko esimangalisayo se-acrylic mirror ekhaya labo, ibhizinisi noma impahla yokutshala imali. Faka isibuko sesitatimende endlini yakho yokugezela, imihlobiso ekhanyayo ekamelweni lakho lokulala noma engeza ukuthinta kokukhanya kunoma iyiphi enye indawo yesakhiwo sakho ngokufaka eyakho i-acrylic mirror sheet ngenxa yamathiphu angenhla!
Ungalifaka kanjani ishidi lesibuko le-acrylic. (2018, Mashi 3). Ibuyiswe ngo-Okthoba 4, 2020, evela kuzindaba zomhlaba:https://www.worldclassednews.com/install-acrylic-mirror-sheet/